iMac 2021 yee-euro ezingama-1.299, ii-AirPods Max ezingama-509 zama-euro kunye nezinye izibonelelo kwiAmazon zeemveliso zeApple | IPhone iindaba
iMac 2021 yee-euro ezingama-1.299, ii-AirPods Max ze-euro ezingama-509 kunye nezinye izibonelelo kwiAmazon zeemveliso zeApple
UIgnacio Sala | 20/09/2021 14:00 | iPad, iPhone
Enye iveki sikwazisa ngefayile ye- ezona zinto zihamba phambili kwiimveliso zeApple ezifumaneka kwiAmazon. Njengomhla wenkcazo yoluhlu olutsha lwe-iPhone 13 lusondela, kubonakala ngathi iApple ayinomdla wokususa isitokhwe esikhoyo kwaye, kwakhona, asifumananga sibonelelo sokuqaqambisa.
Enkosi kwisivumelwano phakathi kweApple kunye neAmazon zokuthengisa iimveliso zabo ngokuthe ngqo kwiqonga le-e-commerce yokugqibela, thenga iimveliso zeApple ngezaphulelo ezinomdla Ngesiqinisekiso esifanayo njengesiqhelo, siyinyani kwaye ngamanye amaxesha sifumana izibonelelo esingasokuze siziphose.
Zonke izithembiso esizibonisayo kweli nqaku ziyafumaneka ngexesha lokupapashwa. Kusenokwenzeka ukuba njengoko iintsuku zihamba, izibonelelo azisayi kubakho okanye ziya kunyuka kwixabiso.
IAmazon iyasivumela Imali yokuthenga zonke iimveliso iyafumaneka kwiqonga layo ngexabiso eliphakathi kwama-75 ukuya kuma-3000 ee-euro ngezavenge ezifanelekileyo ezingenamdla. Iinkcukacha ngezemali ziyafumaneka kwinqaku ngalinye.
1 IMac 2021 nge-1.299 euro
2 I-iPad Air 2020 ukusuka kwi-529 euro
3 Izixhobo ze-IPad
3.1 Isizukulwane sokuqala sePensile yeApple yee-euro ezingama-2
3.2 Imouse yeBluetooth ye-iPad yee-euro ezingama-13
4 Iinyanga ezi-3 zikhululekile kwiAmazon Music HD
5 Izixhobo ze-IP
5.1 I-MagSafe epheleleyo yecala lesikhumba ehambelana ne-iPhone 12/13 Pro Max yee-euro ezingama-97
5.2 I-Apple MagSafe itshaja kabini yee-euro ezingama-130
5.3 Isizukulwana sesi-2 see-AirPods ze-105 euro
5.4 Isizukulwana sesi-2 see-AirPod ezinamacala okutshaja ngaphandle kwamacingo kwi-euro ezili-169
5.5 IProPods Pro yee-euro ezingama-175
5.6 Ii-AirPods Max ze-509 euro
IMac 2021 nge-1.299 euro
2021 i-Apple iMac ...
Uhlaziyo ekudala lulindelwe kuluhlu lweMac lwafika kwangoko kulo nyaka kwaye lwenze ngendlela enkulu. IMac 2021 isinika a Iscreen se-24-intshi enesisombululo se-4.5K Ikhatshwa yiprosesa ye-M1 ye-Apple ekwafumaneka kuluhlu lwe-Pro Pro 2021.
Lo mzekelo usinika amazibuko amabini okwandisa, i-8 GB ye-RAM, i-256 GB yokugcina, I-8 CPU cores kunye ne-7 GPU cores. Ixabiso eliqhelekileyo lemodeli eluhlaza okwesibhakabhaka zii-1.449 ze-euro, nangona kunjalo, sinako yithenge kwiAmazon nge-euro ezingama-1.299 kuphela, emele ukugcinwa kwee-euro ezingama-150.
Thenga iMac 2021 nge-8 CPU cores kunye ne-7 GPU cores nge-1.299 euro
Imodeli ene I-8 CPU cores kunye ne-8 GPU cores, inexabiso eliqhelekileyo le-1.669 euros, ixabiso lelo incitshisiwe yaya kwi-1.399 euro kwi-Amazon ngesixa esifanayo se-RAM kunye nokugcinwa kwehard drive.
Thenga iMac 2021 nge-8 CPU cores kunye ne-8 GPU cores nge-1.399 euro
I-iPad Air 2020 ukusuka kwi-529 euro
I-2020 Apple iPad Air (ukusuka ...
Ukuba isizukulwana esitsha se-iPad okanye i-iPad mini ayihlangabezani neemfuno zakho, olona khetho lufanelekileyo namhlanje, ukuba uhamba kuluhlu lwePro yi-iPad Air. I-2020 iPad Air, enesikrini se-10,9-intshi kunye ne-64GB yokugcina, iyafumaneka kwiAmazon ukusuka kwi-529 euros, emele isaphulelo se-18% kwixabiso eliqhelekileyo.
Ngaphakathi kwi-iPad Air 2020 sifumana iprosesa ye-A14 Bionic, isivamvo somnwe siphezulu, kwiqhosha lasekhaya, iyahambelana nesizukulwane sesi-2 sePensile ka-Apple kwaye inexabiso eliqhelekileyo kwiVenkile ye-Apple ye-649 euros.
I-Pink iPad Air ene-64 GB yokugcina i-euro ezingama-529. Isilivere ye-iPad yomoya ene-64 GB yokugcina i-euro ezingama-626. I-Sky blue ye-iPad Air ene-64 GB yokugcina i-euro ezingama-611.
Isizukulwane sokuqala sePensile yeApple yee-euro ezingama-2
Ipensile ye-Apple (2 ...
Ukuba ufuna ukufumana okuninzi kokungafaniyo esikunikiweyo Ipensile ye-iPad nge-iPad yomoya, ungayifumana nge-126 euro. Ixabiso laso eliqhelekileyo kwiVenkile yeApple yi-135 euros, ayisosaphulelo, kodwa ii-euro ezimbalwa esinokuzigcina azisoze zaninzi kakhulu.
Thenga isizukulwane sokuqala sePensile yeApple ngee-euro ezingama-2.
Imouse yeBluetooth ye-iPad yee-euro ezingama-13
Imouse yeBluetooth, Imouse ...
Ukuba awufuni kuchitha imali eninzi kwimouse ye-bluetooth esebenza neebhetri, eAmazon sinemouse ye-INPHIC, impuku ethi Inexabiso le-12,99 euroIsebenza ngeBluetooth kwaye sinokuyisebenzisa kwikhompyuter njengoko ibandakanya inzwa yokuqhagamshela kwi-USB.
Thenga imouse ye-bluetooth nge-12,99 euro.
Iinyanga ezi-3 zikhululekile kwiAmazon Music HD
Ekuqaleni kuka-Novemba sikwazise malunga nokwazisa iAmazon eyenza ukuba bonke abasebenzisi bayonwabele iAmazon Music HD simahla, Iqonga lomculo lokusasaza lika-Apple kwinkcazo ephezulu.
Esi sipho siyafumaneka kuphela Kude kube ngu-23 Septemba Logama nje ungakhange ukonwabele ukunyuselwa okufanayo kwangaphambili. Emva kweenyanga ezi-3, ixabiso liyi-9,99 euros, ixabiso elifanayo neApple Music. Ukuba ufuna ukwenza ikhontrakthi kule nkonzo kwaye rhuma ngaphambi kokuba kuqale ixesha lokuhlawula, ungayenza nge esi sixhobo.
I-MagSafe epheleleyo yecala lesikhumba ehambelana ne-iPhone 12/13 Pro Max yee-euro ezingama-97
Ukudityaniswa kweApple ...
Ukuba udiniwe ukuphatha i-iPhone yakho ngokukhusela kuphela umva kwaye uyathanda ukonwabela izinto zokwakha ezisetyenziswa yiApple ngaphandle kokubeka emngciphekweni wokuyilahla, iApple isinika imeko yesikhumba, isiciko esifana nesokisi (ukuze siqondane) esivumela ukuba sithwale i-iPhone 12/13 Pro Max ngokhuseleko kunye nokhuseleko olupheleleyo.
Es iyahambelana netekhnoloji ye-MgSafe, ke akufuneki ukuba siyisuse kwimeko yokuyihlawulisa. Ukongeza, kubandakanya nepokotho encinci yangaphakathi yokugcina ikhadi lamatyala, uxwebhu lokuchonga kunye nomtya wokuhlala unawo. Ngaphambili, sinendawo yokubona ixesha okanye ngubani osibizayo.
Ixabiso eliqhelekileyo leli tyala eliqinileyo lesikhumba yi-149 euro, kodwa sinako mfumane kwiAmazon nge97 euro.
Thenga ityala lesikhumba elipheleleyo le-iPhone 12/13 Pro Max.
Esi sikhokelo sikwafumaneka ngombala ofanayo, emfusa kwifayile ye- I-iPhone 12 kunye ne-iPhone 12 Pro yee-euro ezingama-92.
Thenga i-iPhone yesikhumba epheleleyo ye-12 kunye ne-iPhone 12 Pro.
I-Apple MagSafe itshaja kabini yee-euro ezingama-130
Itshaja ye-Apple Dual ...
Ukuba ujonga itshaja yohambo yeApple Watch kunye ne-iPhone 12, isisombululo esisinikwa nguApple sisibini itshaja yeMagSafe, itshaja esongelayo ukunciphisa indawo ekuyo nokuyihambisa ngokulula. Ixabiso eliqhelekileyo lajaja, engabandakanyi iadaptha yamandla, yi-149 euro, kodwa sinokuyifumana eAmazon ngee-euro ezingama-130 kuphela.
Thenga i-Apple MagSafe kabini itshaja nge-130 euros.
Isizukulwana sesi-2 see-AirPods ze-105 euro
I-Apple AirPod ezinamatyala ...
Ii-AirPods yenye yeemveliso ze-Apple ezisinika zona Ixabiso elifanelekileyo lemali kwi-amazon. Kwiveki enye, sinokufumana ii-AirPods zesizukulwana sesi-2 esinetyala lokutshaja ngentambo yombane kubo xabiso lisezantsi: 105 euro. Ixabiso eliqhelekileyo lezi headphone zii-euro ezili-179.
Thenga i-AirPods yesizukulwana sesi-2 ngamatyala ombane ngee-euro ezingama-105.
Isizukulwana sesi-2 see-AirPod ezinamacala okutshaja ngaphandle kwamacingo kwi-euro ezili-169
Isibini-gen AirPods enecala lokutshaja ngaphandle kwamacingo, nazo bafikelele kumaxabiso asezantsi onke eAmazon kwaye sinako ukubabamba ngee-euro ezingama-169 kuphela. Ixabiso laso eliqhelekileyo kwiVenkile yeApple zii-229 ze-euro.
Thenga ii-AirPods zesizukulwana sesi-2 esinamatyala angenazingcingo ngee-euro ezili-169.
IProPods Pro yee-euro ezingama-175
Njengabantakwabo abancinci, ii-AirPods Pro zikwakhona kwiAmazon, ngesaphulelo sama-37% kwixabiso labo eliqhelekileyo lama-279 euros. I-euro ezingama-175 kuphela, singayifumana i-AirPods Pro kwi-Apple, isindise i-euro ezingama-104 ngaphezulu kwexabiso eliqhelekileyo kwiVenkile yeApple.
Thenga i-AirPods Pro nge-179 euro
Ii-AirPods Max ze-509 euro
I-Apple AirPods entsha MAX -...
I-Apple's AirPods Max ikwafumaneka kwiAmazon ngesaphulelo se-19% esinomdla kwixabiso labo eliqhelekileyo lama-629 euros. KwiAmazon ziyafumaneka, kuyo yonke imibala yee-euro ezingama-509.
Ngelixa kuyinyaniso oko ayililo xabiso laso elisezantsi, ebiyi-499 euros kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, isaphulelo sinomdla kakhulu kwaye unikezela ukuba ungaphoswa kwaye awuzange ufikelele kweyangaphambili.
Thenga ii-AirPods Max nakweyiphi na imibala nge-509 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » iMac 2021 yee-euro ezingama-1.299, ii-AirPods Max ze-euro ezingama-509 kunye nezinye izibonelelo kwiAmazon zeemveliso zeApple
U-Kuo uthi ii-odolo ze-iPhone 13 zingaphezulu kwe-12, ukongeza sizakuqhubeka nesitokhwe esincinci